Ihe eji egwuri egwu ... Indy Coffee Shops | Martech Zone
Nwee obi uto site na logos… Indy Coffee Shops
Ndị nke ahụ gụrụ blọọgụ m nwa oge mara na m hụrụ nnukwu iko kọfị n'anya. Ndị enyi m maara na m nwere mmasị iso ndị omempụ na-akpakọrịta Egwuregwu Bean. Ọ bụ ụlọ ahịa kọfị mara mma… ezigbo nri, ezigbo mmadụ, egwu dị egwu na ọtụtụ oche dị mma na ime ụlọ.
Onye ọrụ ibe Indy Erik Deckers dere banyere onwe ụlọ ahịa kọfị ebe a na ọbụna wuru ya Google Map iji gosi folks ebe ụlọ ahịa kọfị nọọrọ onwe ha dị na mpaghara.
Ebe ọ bụ na m dị nnọọ malitere launching mkpụrụ okwu nke Ngwa nkewa maka anụ ufe anụ ọhịa na-akparaghị ókè, M kwere nkwa iso Erik rụọ ọrụ na saịtị iji soro ma jikwaa ụlọ ahịa kọfị Independent Independent. Tonight m rụrụ ọrụ na logo… Abụghị m a graphic omenka na m hụrụ n'anya na-aghọ aghụghọ na-amalite na eze free clipart - ma m na-eche na nke a bụ ezi mmalite! M sere clipart n'ime Illustrator na mgbe ahụ dị nnọọ tinye ụfọdụ n'ígwé na nwere otu styling.
Mpempe akwụkwọ Vector maka onye ihe atụ
Nke a bụ otu ndụmọdụ maka gị, Microsoft Clipart is n'ezie vector dabeere na i nwere ike na-arụ ọrụ na ya na Onye ihe ngosi. Ihe dị na ya bụ ibubata clipart n'ime ngwa Microsoft nke ga - enyere gị aka mbupụ clipart ahụ n'ụdị nke onye na-ese foto na-enwe mmekọrịta. Microsoft Visio bụ otu ngwaahịa.
Chọọ maka saịtị nke ụlọ ahịa kọfị Indianapolis nwere ike ịmalite n'oge na-adịghị anya, yana nke anyị beta nke ngwa nkewa anyi n'ihi na Nnụnụ Anụ Unlimited, jikọtara na sistemụ njikwa njikwa aha ha.
Tags: atymonu seokpachaara anyaego ole seo na-efuokpokoroinbound ahịa ụlọ ọrụahịaego nke seoseomozSlider
Nov 29, 2007 na 7:35 PM
M na-enye ya a 9 nke 10. Ọ bụghị ihe ọjọọ n'ihi na a ndịna mbanye anataghị ikike iji clipart. 😉
Agbanyeghị, echere m na ị kwesịrị ịkwaga onyinyo ahụ nso na iko ahụ, yabụ ị zere iko iko kọfị UFO.
Nov 29, 2007 na 8:21 PM
Gbaa mbọ hụ na ị na-enyocha Monon Kọfị kọfị ma ọ bụrụ na ị nọ na mpaghara Broad Ripple. Ọ dị mma na Broad Ripple ma na-enye ọnọdụ ikuku na-ekpo ọkụ. Iji bulie ya niile, mmadụ abụọ n’ime ndị nwe ya bụ ndị m na ha rụkọ ọrụ na nnụnnụ anụ ọhịa na-akparaghị ókè! Kedu ka nke ahụ maka njikọ?!
Dee 18, 2007 na 8: 30 AM
Nwoke oma? M gaara enwe obi ụtọ na m nwere na na.
Dee 18, 2007 na 8: 41 AM